Nhau - Shinva: Kutarisa paPamusoro-soro Sisitimu
Musi wa17 Gunyana, Chikwata chevatori venhau kubva kuPeople's Daily, Xinhua News Agency, Central Radio neTerevhizheni Chiteshi, Guangming Mazuva ese, Economic Daily nedzimwe nhepfenyuro dzakamira muShandong, pamwe nevatori venhau vematunhu nevemaguta kubva kuMass Newspaper Boka, Shandong Radio neTerevhizheni Chiteshi, Shandong Bhizinesi Mazuva ese uye mamwe mapurovhinzi nevemaginhau midhiya, vakapinda muShinva. Tarisa pane shanduko mhedzisiro yetsva uye yekare kinetic simba uye yemhando yepamusoro kusimudzira mhedzisiro.
Vepepanhau vakashanyira ndokubvunzurudza Shinva Nyowani uye Yakare Kinetic Energy Shanduko Musoro Exhibition Hall uye Shinva Mishonga Yezvigadzirwa, Yakachena Technology Zvigadzirwa uye Radiological Kuongorora uye Kurapa Zvigadzirwa Kugadzira Musangano, uye vakaita kunzwisiswa kwakadzama kwechikwata chekutanga chemapurojekiti akasarudzika "Sninva Biopharmaceutical Equipment uye Kurapa Kufananidza Zvigadzirwa Zvemabhizimusi Purojekiti ”muShandong Dunhu Nyowani uye Yekare Kinetic Energy Shanduko Huru Project Raibhurari.
Wang Yuquan, mutevedzeri wemunyori webato uye maneja mukuru weShinva, akaperekedza vevatori venhau pakushanya uku. Yakaunzawo kune vepepanhau chitunha kukwidziridzwa kwepamusoro kweShinva, zvigadzirwa zvepakati uye matekinoroji ehukama akadai seacacetic acid yakadzika-tembiricha sterilizer yakaberekerwa muShinva, inotungamira yakakura-kuzarura CT uye yakasimba-simba rekurapa elektroni linear accelerator muChina , uye epurasitiki ampoule matatu-mu-mumwe ekuzadza muchina (BFS) iyo yakaputsa vekunze monopoly.
Bvunzurudzo inovavarira kunyatso shambadzira nekuisa mweya wehurukuro yakakosha yeMunyori Mukuru Xi Jinping paSymposium pamusoro peKuchengetedzwa kweKuchengetedzwa kweKuchengetedzwa kweHurumende nekusimudzirwa kweMhando yepamusoro muYellow River Basin, uye kuratidza zvizere kutsvaga kutsva uye mhedzisiro inoshanda inoitwa nedunhu redu mukusimudzira zvipenyu kudzivirirwa uye kusimudzira kwemhando yepamusoro muYero Rwizi Basin, uchifunga mupfungwa dzekuiswa. Sevamiriri vemaindasitiri ari kubuda, Shinva anoteerera kuchirongwa che "kusanganisa, kusimudzira nekuvandudza mashandiro" mumakore achangopfuura, zvakarimwa zvakadzama zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvakanangana nekushandurwa kwesimba nyowani nerekare, uye nekuteedzera nzira. yemhando yepamusoro yekusimudzira. Ino nguva vatapi venhau vakapinda muShinva, vachitarisa pakunzwisisa kusimudzira kwemhando yepamusoro kweShinva.